Labour Department – Foreign Domestic Helper
ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာသည် FDHs များတင်သွင်းမှု မူဝါဒအပါအဝင်၊ ဟောင်ကောင်တွင် ပြည်ပ အိမ်အကူများ(FDHs)၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် စပ်လျဉ်းသတင်းအချက်အလက်များကို၊ FDHs များငှားရမ်းသည့် စံပြု အလုပ်အကိုင်စာချုပ် နှင့် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေများအောက်တွင် FDHs များနှင့် သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်များ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားဆိုင်ရာများ အသိပေး ကြေငြာခြင်းများနှင့် ပြန်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအဖြစ်လည်း ဖော်ပြပေးသည်။ FDHs နှင့် သူတို့၏အလုပ်ရှင်များ နှစ်ဖက်လုံးအား စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်အများ၏ သင်တန်းကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူ အချက်အလက်များအဖြစ် ဤဝဘ်ဆိုက်ထဲတွင် သတင်း အချက်အလက်များကို ဖတ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ (EAs) များမှတဆင့်အလုပ်ရှင်များ FDHs ခေါ်ယူခန့်ထားရမည် သို့မဟုတ် FDHs များအလုပ်အကိုင်ရရှိရမည် ဆိုသည်မှာ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရ၏ လိုအပ်ချက် မဟုတ် ပေမယ့် ၎င်းသည် ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားများ၏ FDHs များအလုပ်ခန့်ရာတွင် အသုံးပြုသော အများဆုံးယေဘုယျ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ FDHs များ၏ သက်ဆိုင်ရာ မိခင်နိုင်ငံများတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်များ ရှိနေနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် မတူညီသော နိုင်ငံများမှ ကူး၍လာခြင်းဖြစ်သည်။ FDHs များ နှင့်အလုပ်ရှင်များ ကိုလည်း EAs များ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသောအခါ အဓိကအချက်များကို သိရှိမှတ်သားမိနေစေရန် “အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတစ်ခုနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း” အခန်းက ဖတ်ရှုထားစေခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် ဟောင်ကောင်ရှိ တရားဝင်လိုင်စင်ရှိသော EA(s)များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန စာမျက်နှာတွင်ရှိသော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သိ။
FDHs ၏အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားမှုများအတွက် စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မှီရေးနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာန ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
COVID-19 ဆုိင္ရာ အေရးၾကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများအတွက် သီးသန့်ခွဲထားမှု အစီအစဉ်များ
နိုင်ငံခြားအိမ်အကူများအတွက် သီးသန့်ခွဲထားမှု နောက်ဆုံးအစီအစဉ်များသည် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်အကျုံး၀င်မည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများအတွက် သီးသန့်ခွဲထားမှု အစီအစဉ်များ (ထုတ္ျပန္ခ်က္)
ကာကြယ္ေဆးထိုးနံုၿခင္းဦးစားေပးအုပ္စုမ်ားကို နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကိုပါ ပါ၀င္နိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႔သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). အြန္လုိင္းမွၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အၿခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးနံုၿခင္းအစီအစဥ္၏ သတ္မွတ္၀က္ဘ္ဆိုက္ (www.covidvaccine.gov.hk)တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရွူနုိင္ပါသည္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တဂေလာ့ဘာသာ၊ ဘဟာစာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဟႏၵဴ၊ ဆင္ဟာလာ၊ ဘဂၤါလီ၊ နီေပါ နွင့္ အူရဒူ ဘာသာမ်ားၿဖင့္လည္း ၾကည့္ရွူနုိင္ပါသည္။
(ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်နိုင်ငံခြားအိမ်ဖော်များကို ဦး စားပေးသည်)
ေနာက္ဆံုးၾကည့္ရွူခဲ့သည့္ ရက္စြဲ 13 April 2021
ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ(COVID-19)နှင့် စပ်လျဥ်းသော အရေးကြီး သတင်းအချက်အလက်
အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း ဥပဒေနှင့် စံနမူနာစာချုပ်အရ အလုပ်ရှင်နှင့် FDH များ၏ စည်းမျဥ်းများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ၊ ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) နှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ.
FDHs ႏွင့္ ၄င္း၏ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ "ကိုဗစ္ ၁၉ စုစည္းအခ်က္အလက္မ်ား ၀က္ဘ္ဆုိက္"(www.coronavirus.gov.hk/)တြင္ အသက္ရွူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါ ၊ အဆုတ္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရွူနုိင္ပါသည္။ ထုိ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ တဂေလာ့ဘာသာ၊ အင္ဒိုနီးရွား ဘဟာစာ သာဘာ၊ ထုိင္း၊ ဟႏၵဴ၊ ဆင္ဟာလာ၊ ဘဂၤါလီ၊ နီေပါ ႏွင့္ အာဒူ ဘာသာစကားမ်ားၿဖင့္ ၾကည့္ရွူနုိင္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးၾကည့္ရွူခဲ့သည့္ ရက္စြဲ 14 March 2022
2022 ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏မွေးနေ့သည် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းဥပဒေအရ အသစ်ထပ်တိုးထားသော အားလပ်ရက်တစ်ရက် ဖြစ်လိမ့်မည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm သို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုပါ။
အလုပ်ရှင်များသည် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသော နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများအား အလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။
အလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (LD) မှ ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်) တွင် အလုပ်ရှင်များအား COVID-19 ကူးစက်ခံထားရသော နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများ (FDH) ကို အလုပ်မထုတ်သင့်ဘဲ ကမ္ဘာနေရာ အနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း (EO) နှင့် စံချိန်စံညွှန်းညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ် (SEC) တို့၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဆက်လက်လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါသည်။
LD မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက " FDH များအား အလုပ်ခန့်ထားသော အလုပ်ရှင်များသည် EO နှင့် SEC တို့အရ ၎င်းတို့၏ တာ၀န်၀တ္တရားများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည်။ FDH သည် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသောကြောင့် အလုပ်သဘောတူစာချုပ်မှ ရပ်စဲခြင်း မပြုသင့်ကြောင်းကို အလုပ်ရှင်များအား သတိပေးလိုပါသည်။ EO အရ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားတစ်ဦးအား ၄င်း၏ ဆိုးရွားသော အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရသည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ ၎င်းအလုပ်သမား ဖျားနာသည့်နေ့တွင် အလုပ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။ EO ၏ သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်သော အလုပ်ရှင်သည် ပြစ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှားတွေ့ရှိရပါက အမြင့်ဆုံးဒဏ်ငွေ $100,000 ချမှတ်ခံရမည်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် EO ကို ဖောက်ဖျက်ပါက သူ/သူမသည် FDH ကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အလုပ်ခန့်ထားရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီသည်ဟု မယူဆဘဲ FDH များအတွက် သူ/သူမ၏ ဗီဇာ လျှောက်လွှာများကို ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မည်။ FDH များ ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် COVID-19 မှ ပြန်ကောင်းမွန်လာခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်ရှင်များက ၎င်းတို့၏ FDH များကို နိုင်ထက်စီးနင်း ဆက်ဆံပါက (ဥပမာ - ၎င်းတို့အား ထုတ်ပယ်ခြင်း) မသန်စွမ်းသူများ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (DDO) ကို ချိုးဖောက်နိုင်ချေ ရှိကြောင်းကိုလည်း အလုပ်ရှင်များအား သတိပေးပါသည်။ "
EO အကျုံးဝင်သော နေရာများတွင် FDH တစ်ဦး ဖျားနာပါက အလုပ်ရှင်သည် အရည်အချင်း ပြည့်မီသော FDH ကို EO ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ ဖျားနာခွင့်ရက်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးအပ်သင့်သည်။ ဖျားနာနေသော ၄င်း FDH သည် သူ/သူမ ဖျားနာသည့်ရက်များကို ကာမိစေရန် လုံလောက်သော အခကြေးငွေ မစုဆောင်းမိပါက အစိုးရသည် အလုပ်ရှင်အား စာနာစိတ်ရှိရန် နှင့် FDH ပေးဆောင်ထားသော ဖျားနာခွင့်ရက်အား ပေးအပ်ဖို့ စဉ်းစားပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် SEC ၏ လိုအပ်ချက်များအရ အလုပ်ရှင်များသည် FDH များအတွက် သင့်လျော်သော နေရာထိုင်ခင်းအပြင် အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသခြင်းကိုပါ ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်ပေးသင့်သည်။
အဆိုပါ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆက်လက်၍ “ FDH များသည် ဟောင်ကောင် မိသားစုများကို အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် ကလေးများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဟောင်ကောင်သို့ ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် သိသာထင်ရှားပါသည်။ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် လက်ရှိတွင် FDH များ၏ အရေအတွက်သည် 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် 400000 ခန့် မြင့်မားသော အနေအထားမှ 340000 ခန့်သို့ ကျဆင်းသွားပြီ ဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင် တိုက်ဖျက်သည့် အခါတွင် အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် နားလည်မှုတို့ကို ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ဒေသခံ မိသားစုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ဟောင်ကောင်အား FDH များ လာရောက် လုပ်ကိုင်ရန် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် FDH များအတွက် ပံ့ပိုးမှုနှင့် ကာကွယ်မှုတို့ကို အားကောင်းရပါမည်။ အလုပ်ရှင်များနှင့် FDH များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကို အတူတကွ တိုက်ဖျက်ကြရန် အစိုးရမှ ပန်ကြားထားပါသည်။ အလုပ်ရှင်များသည် ရောဂါကူးစက်ခံရသော FDH များကို နိုင်ထက်စီးနင်း မလုပ်ရပါ။ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသောကြောင့် အလုပ်ရှင်မှ ထုတ်ပယ်ထားသည့် မည်သည့် FDH မဆို LD ထံသို့ အကူအညီ တောင်းခံ နိုင်သည်" ဟု ပြောပါသည်။
FDH များနှင့် အလုပ်ရှင်များသည် FDH ဟော့လိုင်းနံပါတ် 21579537 ကို (1823 ဖြင့် ကိုင်တွယ်သည်) ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး fdh-enquiry@labour.gov.hk သို့ အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည် သို့မဟုတ် သီးခြားပေါ်ထယ် (www.fdh.labour.gov.hk) ရှိ အွန်လိုင်းဖောင်မှတဆင့် LD ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ COVID-19 နှင့် DDO ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် အလုပ်ရှင်များသည် သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အလုပ္ရွင္မ်ားကိုယ္တုိင္ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူ အလုပ္သမား (FDHs) အတြက္ ဗီဇာေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး ရမည္။
ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနာက္ဆံုး ကိုဗစ္ေရာဂါ (COVID-19) ကပ္ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားမႈအေၿခအေနမ်ားနွင့္ ၿပင္းထန္မႈ အေၿခအေနမ်ားအရ အစုိးရသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား နွင့္ သီးၿခားေၾကညာခ်က္မ်ားကို ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (နယ္စပ္ေက်ာ္ၿဖတ္ ခရီးသြားသူမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း) (ကပ္ 599 အိတ္ခ်္၊ ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား)(www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) ကို ေဟာင္ေကာင္သို႕ မေရာက္ရိွမွီ 14 ရက္အတြင္း ေရာဂါအႏၱရယ္ၿမင့္မားသည့္နုိင္ငံမ်ားၿဖစ္သည့္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ နီေပါ၊ ပါကစ္စတန္၊ ဖီလစ္ပို္င နွင့္ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံမ်ား) သို႕ လည္ပတ္သြားလာခဲ့ေသာ ခရီးသြားမ်ားကို လူထုက်န္းမာေရးကာကြယ္မႈအတြက္ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ေတြ႕ရိွမႈ ေလ်ာ့က်နုိင္ရန္ လုိက္နာရမည္းအခ်က္မ်ားကို လည္း ထုတ္ၿပန္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာသီးၿခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ 2020 ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ 25 0.00 am ရက္ေန႕ တြင္ စတင္အက်ဳံ႕း၀င္မည္ ၿဖစ္ၿပီး ထပ္မံေၾကညာခ်က္မထုတ္ၿပန္ခ်ိန္အထိ အသက္၀င္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။
2020 ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ 18 ရက္ေန႕ တြင္ LD သည္ (FDHs)၊ အလုပ္ရွင္မ်ား နွင့္ EAsကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွတစ္ဆင့္ (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm)). ေဖာ္ၿပပါတုိ႕ကို လိုက္နာမွတ္သားရန္ သတိေပးေၾကညာခဲ႕ပါသည္။ သီးၿခားေၾကညာခ်က္နွင့္ အက်ံဴး၀င္ေသာနုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား FDH သည္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ာကို ေပးပို႕ ရမည္ၿဖစ္သည္။
1.FDH မိမိ၏ နာမည္နွင့္ ပတ္စ္ပို႕ နံပါတ္ ေဖာ္ထုတ္ၿပသထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္း (သို႕) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ မွထုတ္ေပးသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သို႕ တရုတ္ဘာသာ လက္မွတ္ (သို႕ )စာသည္
(က) သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူ FDH မွ ကိုဗစ္ေရာဂါ COVID-19 နယူကလီရစ္ အက္စ္စစ္စမ္းသပ္မႈကို ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူ FDH မွ နမႈနာကို ေလယာဥ္မထြက္ခြာမီွ 72 နာရီအတြင္း ရယူထားၿခင္း၊
(ခ) နမႈနာကို စမ္းသပ္ခ်က္သည္ ကိုဗစ္ေရာဂါ COVID-19 အတြက္ နယူကလီးယားအက္စ္စစ္ စမ္းသပ္ခ်က္ၿဖစ္ၿခင္း၊
(ဂ) သက္ဆုိင္ရာအိမ္အကူ FDH ၏ COVID-19 စမ္းသပ္ခ်က္ရလာဒ္သည္ အနွူတ္ၿဖစ္ၿခင္း။ တုိ႕ကို ၿပသရပါမည္။
2. သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား FDH ၏ မိမိ၏ နာမည္နွင့္ ပတ္စ္ပို႕ နံပါတ္ ေဖာ္ထုတ္ၿပသထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္း (သို႕) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ မွထုတ္ေပးသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ မူရင္းအစီရင္ခံစာ။
3. အဆိုပါ ဓါတ္ခြဲခန္း (သို႕) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ တည္ရိွရာ ေဒသ၏ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မွ အဆိုပါ ဓါတ္ခြဲခန္းသည္ အစိုးရမွ အတည္ၿပဳေထာက္ခံထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္း (သို႕) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနၿဖစ္ေၾကာင္းအဂၤလိပ္ဘာသာသို႕ တရုတ္ဘာသာၿဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေထာက္ခံစာ။
4. သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား FDH သည္ ေဟာင္ေကာင္သို႕ ဆုိက္ေရာက္သည့္ေန႕မွ 14 ရက္ထက္မနည္းေသာ ေဟာ္တယ္တစ္ခုမွ အခန္းၾကိဳတင္ငွားရမ္း ၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ဘာသာ သို႕ တရုတ္ဘာသာၿဖင့္ အတည္ၿပဳခ်က္။
အလုပ္ရွင္သည္ ၄င္းတို႕၏ FDHsအတြက္ မၿဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ ကြာရမ္တင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အတြင္း အလုပ္သမားအတြက္ နယူးကလီးရစ္ အက္စ္စစ္ စမ္းသပ္ခ်က္၊ ေဟာ္တယ္အခန္းကုန္က်စရိတ္၊ အစားအစာ စရိတ္တို႕ ကို က်ခံေပးရမည္ ၿဖစ္သည္။
အထက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ImmD)သည္ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္အသစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ လက္ငင္းကာလတြင္ပင္ FDHsအတြက္ ဗီဇာေလ်ွာက္ထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ (ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးသား ၿဖစ္ေသာသူမ်ား၊ အတည္ၿပဳခြင့္ၿပဳခ်က္ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားၿပီးသူမ်ား အပါအ၀င္) ၄င္းတို႕၏ FDHsအတြက္ ကိုဗစ္ ေရာဂါစမ္းသပ္ခ်က္ COVID-19 နွင့္ ေဟာ္တယ္ ကြာရမ္တင္း ကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ ၿဖစ္ၿပီး 2020 ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ 25 ရက္ေန႕ တြင္ (သို႕) ထုိရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရိွေသာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား FDHs အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ကို တာ၀န္ယူပါမည္ဟူေသာ စာၿဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်က္ကို ေဖာက္ၿပန္ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ FDHsအတြက္ ေဟာင္ေကာင္ၿပည္၀င္ခြင့္ကို ၿငင္းပယ္ခံရမည္ ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္FDH ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန (ImmD) ၏ ၀က္ဘ္ဆုိ္က္www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html မွ ေဒါင္းလုပ္ရယူနုိုင္ၿပီး လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန (ImmD) ၏ ရံုးခ်ဳပ္ နွင့္ ရံုးခြဲမ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူနုိင္ပါသည္။
နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား FDH ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ စံုစမ္းၿပဳလုပ္လုိပါက လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန ImmD သို႕ 2824 6111 သို႕ ဖုန္းေခၚဆုိ၍ လည္းေကာင္း enquiry@immd.gov.hkသို႕ အီးေမးလ္ေပးပို႕ ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးၿမန္းနုိင္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ေရး အက်ိဳးအၿမတ္ဆုိင္ရာတို႕ကို စံုစမ္းလိုပါက အလုပ္သမားေရးရာဌာန LD သို႕ FDH hotline 2157 9537 (1823 နိုပ္၍) ဖုန္းေခၚဆုိ၍ လည္းေကာင္း
fdh-enquiry@labour.gov.hkသို႕ အီးေမးလ္ ေပးပို႕၍ လည္းေကာင္းဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။